Nhungamiro yako kune yakanakisa imbwa chikafu cheGolden Retrievers - Inobereka
Nhungamiro yako kune yakanakisa imbwa chikafu cheGolden Retrievers
Vanodzosera Goridhe ndeimwe yesarudzo dzepamusoro semhuka yemhuka. Ivo vanozivikanwa nehunhu hwavo hwekutamba, hune rudo, uye nejasi ravo rinodakadza regoridhe.
Kunyangwe iwe uri kuronga kuzviwanira iwe iyi pooch kana iwe uchitova unayo Goldie yako wega, vane mutoro paw vabereki vanogara vachipa yummy uye zvine hutano chikafu kune avo vhudzi vacheche.
Asi, ndechipi chakanakisa imbwa chikafu cheGolden Retrievers? Ramba uchipuruzira uye uwane!
Wepamusoro gumi neshanu ezvakanakisa imbwa chikafu zvigadzirwa zveGolden Retrievers
Ungasarudza sei chikafu chakanakisa cheGoridhe Retriever yako?
Goridhe Retriever chinodikanwa chekudya: Chii chekutarisa mune icho chinyorwa
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo (FAQs)
Yakanakisa imbwa inobata yeGolden Retrievers
Chii chinoita kuti imbwa idye yakanaka yeGolden Retrievers?
Kune zvakawanda zvembwa zvekudya sarudzo pamusika, uye zvinogona kuwana zvinorema, kunyanya kune varidzi vatsva.
Usati waenda kuchitoro kana kuodha online, aya ndiwo mamwe emhando dzakanakisa dzekudya imbwa dzeGolden Retriever vana, vakuru, uye vakuru.
Yakanakisa imbwa chikafu cheGolden Retriever vana
Kukundwa nesarudzo dzakawanda dzembwa chikafu chembwa? Kunze kwekusarudza imwe yakanyatsogadzirwa yemhando huru, tarisa zvimwe zvakakosha zvigadzirwa zvinopihwa izvi zvigadzirwa zvinobatsira wako weGold Retriever puppy.
Royal Canin Goridhe Retriever Puppy Yakaoma Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Chicken Na-Chigadzirwa Kudya, Chibage, Gorosi Gluten
Nemazinga ecalcium pane chete 0.97% uye phosphorus pa0.82%, iri sarudzo yakachengeteka yevana. Iyi yekubheka ndeye zviyo-zvinosanganisirwa uye zvakagadzirirwa kuti zvive nyore kugaya kweGolden Retriever vana veanosvika zera remwedzi gumi nemashanu.
Tora kutarisisa kwakazara pane iyi recipe ne nekudzvanya apa .
Purina Pro Chirongwa Puppy Huru Kuberekera Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Nyuchi, Rice, Chibage Gluten Kudya
Izvi zvine glucosamine inosimudzira hutano hwakanaka. Fomura iyi inoshandisa huku chaicho pachigadziko chayo, inozvirumbidza maoga ane hupfumi hwehove, mapurobioti anorarama, 1.1% calcium, uye 0,9% phosphorus. Ichave nechokwadi chemuviri hutano hutano uye rutsigiro rwembudzi yako hutachiona.
Madhaimani Naturals Makuru Ekubereka Puppy Fomula Yakaoma Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Gwayana, Kudya kweGwayana, Yese Zviyo Bhuruu Rice
Yakagadzirwa negwayana chairo rekukura kwembudzi, iyi yekuzadza- uye isina chibage fomura yakasimbiswa neL-Carnitine, Omega-6, uye Omega-3 fatty acids. Iyo inowedzerwa ne superfoods uye ine 1.2% calcium, uye 1.0% phosphorus.
Nutro Yakanaka Zvakakosha Makuru Kuberekera Puppy
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Nyama yehuku, Chikafu chehuku, Rice rose Rice
Yakagadzirwa nezvisikwa masosi eglucosamine uye chondroitin kubva kuhuku kuvaka mapfupa akasimba. Iyi yekubheka inokodzera matumbu akaomarara, uye macalcium ari pakati pe1.20-1.70%, ine phosphorus pa1.0-1.6%.
Bhuruu Buffalo Hupenyu Kudzivirirwa Fomura Huru Kuberekesa Puppy Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Yakapihwa huku, Chikafu chehuku, Rice Rice
Iyi fomura inouya nechavo chiratidzo cheLifeSource Bits chinotenderwa neveti uye vezvipfuyo vanovaka muviri Iko kune antioxidant-yakapfuma zvigadzirwa zvinosanganisirwa kutsigira yako mbwanana kukura. Calcium mazinga akakomberedza 1.1% uye phosphorus zvemukati me0.8%.
Yakanakisa imbwa chikafu cheGolden Retriever vakuru
Kana iwe uine yakazara-yakakura Goridhe Retriever, heano edu epamusoro mapiki eiyo imbwa chikafu zvigadzirwa izvo zvinobatsira kuchengetedza yako pooch mune tip-yepamusoro chimiro.
Raviro yeMusango wezviyo Pacific Stream Yemahara Yakaoma Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Salmoni, Kudya kweHove yeOgungwa, Mapapatata Anonaka
Kune imbwa dzinoshingairira ine gourmet palates, ichi chiri chese-chechisikigo, chezviyo- uye chisina kuzadza fomura. Yakazara neOmega-3 uye Omega-6 fatty acids kubva kune salmon hove mafuta kubva salmon nyowani.
Primal Freeze-Yakaomeswa Nuggets Nyuchi Fomula Fomu Yekudya
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Yemombe Mwoyo, Yemombe Zviropa, Ground Nyama Mapfupa
Izvi zvinonyanya kukodzera imbwa dzinoshanda dzinoda mapuroteni epamusoro (77% yemombe!). Iwe unogona kuwedzera mvura kune ichi chando-chakaomeswa imbwa chikafu kana kuishumira iyo yakaoma. Iyo yakasikwa, isina zviyo, uye sarudzo yakanaka kune avo vanoda kufudza chikafu chisina mbichana pasina kunetsekana.
Canidae Zviyo-Mahara Zvakachena Ancestral Tsvuku Meat Fomula
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Gwayana, Kudya Kwenguruve, Kudya Kwembudzi
Iyi sarudzo-yemahara sarudzo ndeyeavo vanoda chikafu padhuze neanogona kudya musini. Iyo ine protein yakatorwa kubva kune tsvuku nyama masosi akasanganiswa nemhando yavo yakasanganiswa yemaprobiotic, antioxidants, uye omega mafuta acids.
Natural Balance LID Salmon & Rakatapira Mbatata Fomura Zviyo-Mahara Akaoma Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Sarimoni, Menhaden Kudya Kwehove, Mapapatata Anonaka
Yakagadzirwa ine mashoma zvigadzirwa, ino kibble ndeye huku-, zviyo-, uye kuzadza-kwemahara. Izvo zvakanakawo kumatumbu anonzwisisa. Iyi fomula inoratidzira saumoni chaiyo, inozovapa iyo Omega-3 fatty acids yavanoda.
Royal Canin Goridhe Retriever Adult Yakaoma Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Brown Rice, huku By-Chigadzirwa Kudya, Oat Groats
Nema kibbles akakura kupfuura avhareji, izvi zvakanyatsogadzirirwa maGolden Retrievers pamusoro pemwedzi gumi neshanu uye zvinodzivirira nyaya dzemudumbu. Inosanganisira Taurine, EPA, uye DHA yehutano hwemwoyo.
Yakanakisa imbwa chikafu chevakuru veGolden Retriever
Yako yeGolden Retriever shamwari yasvika pazera re8 kana 9, saka kunyangwe pooch yako iine zvimwe zvirwere kana ichiratidzika kunge ine hutano hwakanaka, idzi imbwa chikafu zvigadzirwa zvine zvigadzirwa zvinozoshongedza pfungwa nemuviri wake kuti zvirambe zvichienderera.
Royal Canin Saizi Hutano Hutano Hweguru Kukwegura 8+ Yakaoma Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Chicken Na-Chigadzirwa Kudya, Brewers Rice, Gorosi
Kunze kwekudzivirira imbwa yako kubva kumatambudziko ane chekuita nejoini senge arthritis, iyi nzira yakapfava padumbu uye inodzivirira kurasikirwa kwemhasuru. Inokurudzirawo hutumbu uye hutano hwemwoyo.
Instinct Raw Boost Senior Grain-Freeze-Yakaomeswa Mapundu Akaomeswa Akaoma Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Chikafu chehuku, huku, Tapioca
Ichi kibble uye chando-chakaomeswa mbishi chikafu chisanganiswa chakasimbiswa nezvinovaka muviri uye omega maoiri emoyo hutano uye kuchengetedza mapfupa akagwinya. Iwe unogona kuwedzera imwe mvura kuti unyorove chikafu kana kuigadzira yakaoma - nzira inonakidza yekushandura zvinhu kumusoro kwemukomana wako wekare.
Nutro Yakanaka Yakakosha Makuru Kuberekesa Vakuru Vakaoma Imbwa Chikafu
Ichi chibage-, gorosi-, uye isina-soy recipe yembwa dzakura zvine hunyanzvi zvine zvakasikwa masosi eglucosamine uye chondroitin. Inosanganisira antioxidants yekuwedzera immune system yavo.
Purina ONE SmartBlend Yakasimba Kukura 7+ Yevakuru Fomura Yakaoma Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Huku, Rice Rupfu, Chibage Gluten Kudya
Iyi diki-saizi kibble inogona kuve nyore pane yako shaya yembwa shaya. Yakagadziridzwa nemafuta e botanical kuti uchengetedze pooch yako huropi hwakakwana se fiddle, zvakare ine zvakafanira zvinovaka muviri kuti umudzivirire kubva kujoini chirwere.
Daimondi Naturals Senior Fomura Yakaoma Imbwa Chikafu
Pamusoro 3 zvigadzirwa: Nyama yehuku, Chikafu chehuku, Yese Zviyo Bhuruni Mupunga
Zviri nani kukodzera kune vakuru vanoshanda, iyi fomula yakawedzera mapurobioti anobatsira kutsigira kugaya kwakakodzera. Iyo zvakare ine zvigadzirwa zvekuchengetedza majoini ane hutano, moyo wakasimba, uye jasi rinopenya.
Paunenge uchifunga nezve rudzii rwechikafu chembwa, chikafu, kana kuti yakawanda sei yekudyisa yako Goridhe Retriever, inofanirwa kugara ichienderana nezera ravo, saizi, chikamu chezviitiko kana metabolism, uye hutano .
Goldens imbwa dziri pakati nepakati-hombe dzinoda a high-protein chikafu kuvaka uye kutsigira mhasuru dzavo.
Mbwanana dzinenge dzichida kanokwana makumi maviri nemasere kubva muzana, nepo vakuru vachifanira kuve neinosvika 18%.
Mafuta, ari muchimiro chemakoriyori, akakoshawo sezvo iri imbwa yako yakamisikidzwa sosi yesimba - zvirinani 8% yevana uye 5% yevakuru.
Kusiyana nemhando diki, eGolden Retrievers inoda a koriori-inodzorwa kudya . Kuwedzeredza macalorie kunogona kuita kuti maGoldies akure nekukurumidza kana kuvaita kuti vawedzere kufutisa, zvichikonzera kumatambudziko emabhonzo nemajoini. Saka yakaderera calcium uye phosphorus mazinga akanyanya kunaka.
Vamwe vanoti iko kushandiswa kwakanaka kweGoldens kunofanirwa kunge kuri kudarika 30% protein, isingasviki 20% carbs, uye zvirinani 15% mafuta zvemukati . Asi ramba uchifunga kuti hakuna HAPANA-saizi-inokodzera-ese mhando yekudya.
Iwe uchafanirwa kufunga kusarudza imbwa chikafu, kana recipe yakajeka yakagadzirirwa vana, vakuru, uye vakuru veGolden Retrievers. Tarisira kuti uchafanirwa kuchichinja zvinoenderana, uku uchifunga nezvezvaunoda zvipfuyo zvako kana zvaunofarira.
Kunzwisisa mazwi anoshandiswa mumazita ndiyo nzira yakanakisa yekuziva mhando yechikafu chembwa. Ngatishandisei huku semuenzaniso.
Chicken isina modifera Icho chinoumba chinogadzira 70% kana kupfuura yechigadzirwa.
Nyuchi sechinoshandura Chinhu chinoumba chinogadzira gumi muzana kana kupfuura zvechigadzirwa.
Nehuku Iko kune 3% kana zvimwe zvechigadzirwa.
Chicken kuravira Iko kune isingasviki 3% yechigadzirwa.
Chikafu chehuku Chinhu chakagadzirwa chisingasanganisi minhenga, misoro, tsoka, kana matumbo.
Huku Chinhu chisina kugadzirwa chakabikwa muchiitwa.
Chicken ne-chigadzirwa Inosanganisira tsoka dzehuku uye matumbo.
Huku chaiye Chigadzirwa chacho chingangoshandisa nyama yehuku yakachena uye ganda chete.
* Izvi zvakafanana nechero protein protein senge turkey, nyama yemombe, gwayana, salmoni, nezvimwe.
Tenda kana kwete, asi Kana iyo yakarongedzwa ikati 'yakakwana uye yakaenzana,' chitambi chakakodzera zvinoreva kuti inosangana nezvinodiwa zvishoma zvehutano hwechipfuwo chako.
Izvo zvinoshandiswa zvaunofanira kudzivirira
Chenjerera zvimwe zvekudya zvembwa izvo zvinoumbwa nemidziyo inorambidzwa kana inozivikanwa carcinogens.
Heino runyorwa rwezvigadzirwa zvausingafanire kufudza chipfuwo chako:
Butylated hydroxyanisole (BHA) uye Butylated hydroxytoluene (BHT)
Tertiary butylhydroquinone (TBHQ)
Kudya-kusina zviyo kwakanaka kune Goridhe Kudzosera?
Ichi chisarudzo chega. Asi iwe waizviziva here kuti Chikafu neDrug Administration (FDA) yakaziviswa muna Chikunguru 2018 kuti kudya kusina zviyo kune hukama nezviitiko zvakawanda zveDilated Cardiomyopathy (DCM) imbwa?
Zvinoenderana nekuferefeta kwavo, makumi mapfumbamwe kubva muzana emazana matatu emamiriyoni eDCM ndeye canine anodyiswa nezvikafu zvisina zviyo - vamwe vakatobatanidzwa kana kukanganisa katsi uye imbwa dzinza dzese saizi mukati memhuri imwechete.
Yakatanga gakava rese, uye kunyangwe iyo FDA haina kusunungura chirevo chepamutemo nezvenyaya iyi, nyanzvi dzakadai saLisa M. Freeman, DVM, Ph. D., DACVN yakati zvinogona kudaro nekuda kwezvimisikidzo zvinoshandiswa kutsiva zviyo kana izvo zvinowanikwa Zvokudya zveBEG zvakaita semichero, miriwo, uye nyama dzekunze.
Canine Dilated Cardiomyopathy muGolden Retrievers haina kujairika, asi iwe unofanirwa kuziva izvo isina gorosi haina hutano hwakanaka uchienzaniswa nereji-inosanganisira mapapiro. Veti vanoti zviyo inyowani sosi yecarbs, uye zviri nyore kugadzirisa.
Asi mhuka dzinovaraidza dzinonzwisisa kana dzinokanganisa zviyo zvinosarudzika.
Vamwe veterinarians vanokurudzira chikafu chisina imbwa-chisina imbwa kuti uchengetedze canine yako kubva kuhurwere uye matambudziko emudumbu, kunyanya kubvira neutachiona hwezviyo hunogona kukura chero nguva .
Kusarudza imbwa chikafu cheGolden Retrievers ine matambudziko ehutano
Goridhe Retrievers inokonzeresa kurwara, kupisa nzvimbo, kuora matumbu, hosha dzemwoyo, uye kufutisa. Neraki, kune zvekudya zvembwa uye zvimwe zvinongedzo izvo zvinobatsira kuchengetedza kwavo hutano kugadzikana.
Kune imbwa dzinotambura kufutisa , iwe unogona kuchinjanisa hafu yekibble yavo yemapatata, bhinzi girini, kana pizi kuvabatsira kuti vanzwe kuzara. Kana iwe uchida kutsvaga kana yako Goridhe Retriever yakawandisa, verenga chinyorwa ichi .
Nzvimbo dzinopisa uye matumbu akasimba anokonzerwa nharaunda, chikafu, kana zvimwe zvakasanganiswa segorosi uye yakaoma kibble. Apa ndipo panogadzirwa zviyo zvisina mabikwa uye zvekubika kumba mabikiro ikava mhinduro.
Sezvatakambotaura, kusagadzikana kwechikafu kunogona kuratidza chero zera. Kungoita kuti Goridhe rako raive richiita zvakanaka pane imwe kibble hazvireve kuti zvinomuitira zvachose.
Tsvaga kuraira kwachiremba wako kana ukacherechedza zviratidzo zvechirwere sekugwinha kweganda, kuchenesa uye maziso emvura, kugara uchitapukira nzeve, jasi risina kujeka, mikoko, tsvuku iri pasi, nzeve dzakazvimba, miromo, maziso, manyoka, kana kurutsa.
Kusarudza yakanakisa imbwa chikafu chako cheGolden Retriever kunogona kudzivirira zvirwere
Canine hip dysplasia inokura panguva yavo kukura danho . Kupa chikafu chinogadzirirwa hukuru-hwembwanana kunoderedza njodzi dzekukura kwechirwere ichi.
Kudya kwakakodzera kunogona kudzivirira chirwere cheshuga, cholesterol yakawanda, uye kunyangwe gomarara.
Kufutisa kunogona kupfupisa hupenyu hwavo uye kudzikisira hupenyu hwavo. Kudya kwakaringana nezvose zvinovaka muviri kunogona kudzivirira matambudziko aya kuratidza.
Iwe unofanirwa here kupa yako Goridhe Retriever yakaoma mabhuru, chikafu chakanyorova, mbishi chikafu, kana kugadzirwa pamba?
Ndiyo sarudzo yepamusoro yekupa imbwa chikafu, nekuda kwekuti zviri nyore. Asi chenjera se yakaderera mhando mhando mabubbles anowanzo zadzwa nema fillers , izvo zvinogona kukonzera matambudziko ehutano.
Tarisa mabhuni akaomeswa ane akasiyana mapikicha anoenderana neyako yeGolden Retrievers yekukura saizi, zera, uye mararamiro.
Kunyangwe zvadzo dzichinyanya kukwezva imbwa, zvinodhurawo kunyangwe dziine zvikafu zvinovaka muviri sezvinoita mabubbles.
Zviri kazhinji inokurudzirwa imbwa dzinonetseka kudya , kunge ekare ma canine ane mazino akabviswa. Inogona zvakare kupihwa kune imbwa inopora kubva pakurwara kana kuvhiyiwa.
Ive nekuchengetera nezvakakangwa imbwa chikafu chinoti 'ndiyo nyama yese' nekuti chipfuwo chako chinoda zvinopfuura nyama chete kuti ugare uine hutano. Rudzi urwu rwechikafu rune hwakaganhurirwa pasherufu hupenyu uye haipe mabhenefiti akafanana izvo zvinokanganisa zvinoita, sehutano hwemazino.
Iwe unogona kusarudza kusanganisa izvo zviviri kana iwe uine imbwa inosarudza iyo inoramba kudya pachena kibble.
BARF (Biologically Yakakodzera Raw Zvikafu)
Zvinotendwa kuti mbishi mbichana inogona kubatsira kudzikisira tsvina yemunhu chikafu nekuti inowanzo shandisa nyama yenyama iyo vanhu havawanze kudya.
Tinofanira kuziva nezve njodzi uye mabhenefiti echikafu chimbishi chikafu chembwa , zvakadaro. Zvinotora kuedza kwakawanda kugadzirira uye kugona kubata mamwe mavhairasi. Nepo salmonella yaisazove dambudziko kune yako Goldie, ichave yako nevanhu vari mumba mako. Kuchengetwa kwekuwedzera kunofanirwa kutorwa kunotsvagirwa nyama ine hutano uye inehunhu.
Imbwa-yakabikwa imbwa chikafu
Izvi zvinodawo nguva uye kushanda nesimba, uye zvinonetsa kugadzira chikafu chakaringana cheGolden Retriever yako kubva pakutanga uchichengeta koriori kuverenga.
Vanogona kurarama nechikafu chevegan, asi isu HATINOGONESESA asiri-nyama manyuko epuroteni nekuti haizobatsire imbwa yako hutano hwepanyama uye hwepanyama.
Zvibereko nemiriwo yako Golden Retriever inogona uye haigone kudya
Kune zvakawanda zvekudya kwevanhu izvo imbwa yako havafaniri kudya , saka takakuita mutungamiri.
Chinyorwa chezvikafu zvevanhu zvakanaka uye zvakaipa kune imbwa
Maapuro (isina musimboti)
Bhanana (zvine mwero)
Chibage (hapana cob)
Watermelon (isina mbichana kana mhodzi)
Chikafu chekugadzira iwe chaunogona kuedza kune yako Goridhe Retriever
Takawana kamukira kaunogona kuedza kugadzirira yako Goldie. Izvi zvine 72% mapuroteni, 23% mafuta, uye 10% carbs, anosvika 412 macalorie pamukombe.
1 1/2 makapu mutsvuku mupunga
1 tablespoon mafuta omuorivhi
3 mapaundi pasi turkey kana huku
3 makapu mwana sipinashi, akachekwa
2 karoti, shredded
1/2 mukombe peas, makedheni kana mazaya
Pheka mupunga uye isa parutivi
Pisa mafuta omuorivhi muhombodo hombe kana pani yakadzika
Wedzera pasi turkey kana huku uye fambisa-fry kusvikira yanyorova
Wedzera musipinashi, karoti, zucchini, pizi, uye mupunga wakasviba
Pheka kusvikira sipinashi yasvava uye bvumira kuti itonhorere
Tarisa uone munhu waCooper anokuchidzira kudya kwake kubva pakutanga:
Ndezvipi uye kangani zvaunofanira kufudza yako Goridhe Retriever?
Zvinoenderana nemunhu weGolden Retriever nekuti mamwe acho akanaka pakurongedza kudya kwavo. Kana zvirizvo, unogona kusunungura chikafu. Izvo zvinoenderanawo nekushanda kunoita imbwa. Kana Goldie wako akashanda nesimba pane rimwe zuva, mashoma macalorie angadikanwa.
Paavhareji, inoshanda yeGold Retrievers inoda 1,353 kusvika 1,740 macalorie pazuva , nepo sedentary Goldens ichingoda chete zvingangoita 989 kusvika 1,272 macalorie zuva nezuva.
TO imbwa koriori karukureta ichave inobatsira kuona kuti imbwa yako inofanirwa kudya zvakadii. Chero bedzi imbwa yako iri kukura zvakanaka uye isingarongedze pamapondo, haufanire kunetseka zvakanyanya.
Semutemo wenguva dzose, imbwanana inofanira kunge ichidya ½ mukombe wekubira, kudya zvina zuva kusvikira ave nemwedzi mitatu.
Around 3-6 mwedzi, iye anofanira kunge achidya katatu. Unogona kuchinjanisa chikafu chembwanana chake chikafu chevakuru kutenderera kwemwedzi mitanhatu kusvika kumakumi matanhatu kana mushure mekumuomesesa.
Gara uchikanganisa kudivi rekuchenjerera, zvakanaka kuva pane mbwanana chikafu kwenguva yakareba kupfuura inodiwa .
Kana vatendeuka gore rimwe chete, unogona kuvapa kudya kamwe chete pazuva (2-3 makapu) kana kuigovanisa muzvokudya zviviri - mangwanani uye kwemanheru.
Gadzirisa chikafu chechipfuwo chako kana iwe usingakwanise kunzwa mbabvu dzake (zvichireva kuti akanyanya mafuta), kana iwe unogona kuona mbabvu dzake (zvichireva kuti haana kudya zvinovaka muviri).
Shanduko: Ungachinja sei kubva kumbwanana uchienda kune mukuru imbwa chikafu?
Chero nguva yaunenge uchidyisa fomula nyowani, ita shuwa iwe shanduko zvishoma nezvishoma . Kwemazuva mashoma ekutanga, unogona kutsiva 25% yeakare kibble neiyo nyowani nyowani.
Kutenderedza zuva rechitatu, wedzera imbwa nyowani chikafu kusvika 50%, uye 75% pazuva rechishanu. Mushure mevhiki, imbwa yako inofanira kukwanisa kuchinjira kuchikafu chitsva kana kamukira.
Iwe haufanire kutevedzera chirongwa chiri pamusoro zvakanyanya. Unogona kuenda zvishoma kana kuwedzera zvishoma, zvinoenderana nekuti yako Goridhe inoitisa sei kune nyowani nyowani. Pfungwa ndeyekumusvitsa kuchikafu chitsva zvinyoro nyoro .
Vanotora zveGoridhe vanoda zvinowedzera here?
Mabubbles ane mazwi 'akazara uye akaenzana' anofanira kuva nezvose zvinovaka muviri zvavanoda, asi zvinowedzera zvinogona kugadzirisa chero kushomeka mukudya kwembwa yako.
Kana iye ari kudya chikafu chakaringana, haafanire kuda chero zvinowedzera. Asi kana iwe uchimupa chikafu chakabikwa kumba, ungangoda kufunga nezve multivitamin.
Kune mapfundo mapfupa nemapfupa, iwe unoda kuve nawo glucosamine uye chondroitin .
Omega-6 mafuta acids inogona kuchengetedza moyo uye kupa imbwa yako jasi rinopenya. Kuti udzivirire uropi uye chiropa, tsvaga choline . Kunze kweizvozvo, imbwa yako inoda zvakakosha mavitamini vakadai saA, B, C, E, K.
Nyatsotevedzera huwandu hwakakurudzirwa hwevitamin nekuti imbwa yako inogona kuwandisa.
Imbwa dzese dzinogamuchira kudzidziswa kwakanaka kwakasimbiswa neyummy treats. Kuti udzivise kuwedzeredza yako yeGolden Retriever nezvikafu zvishoma, iva nemhando mbiri dzemubairo.
Kutanga ndeye yakaderera-kukosha kurapa seyakakosha mubairo. Inofanirwa kuve ine hutano, diki kana yakapusa kupaza kuita zvidimbu, uye ine yakaderera macalorie nemafuta. Zuke's Mini Naturals Hutano Hunyoro Kurovedza Kunoita chisarudzo chakakurumbira nevadzidzisi vembwa.
Imwe sarudzo imbwa-yakachengeteka michero kana mavegi akachekwa kuita madiki machubhu.
Nezvemhando yepamusoro-soro, enda kune chimwe chinhu chakakura uye chinonaka sezvo uchave mubairo wembwa yako yekuzadzisa zvinonetsa zvakanyanya. RUVARA Renje Renje Inobata Masango Bits Zviyo-Mahara Kudzidzisa Imbwa Inobata (Salmon Recipe) ine hutano uye izere neOmega-3 Fatty Acids uye DHA yehutano hwejasi.
Kune zvigadzirwa zvemumba, unogona kugadzirira huku inodziya kana turkey zamu. Cheese zvakare yummy, asi chete kana imbwa yako isiri lactose isingashivirane. Peanut butter ndeimwe sarudzo yakanaka.
Ramba uchifunga kuti hapana 'yakanakisa' imbwa chikafu. Pane imwe inonyatsokodzera yako Goldie - ine mafuta-to-protein reshiyo isingasviki 75 muzana.
Panofanira kuva nyama-yakavakirwa mapuroteni uye zvine mwero makabhohaidhireti zvemukati . Dzivisa chero makemikari anopokana senge mavara eakagadzirwa kana zvisingazivikanwe zvigadzirwa.
Ndeipi yakanaka imbwa chikafu chako cheGolden Retriever? Goverana nesu mabhenefiti ayo ekubatsira vamwe Goldie vabereki nekupindura pazasi.
Ridgeback Imbwa Inobereka Ruzivo uye FAQs
Mini Bernedoodles vari Fluffy, Akangwara, uye… Hypoallergenic?
Dachshund Mazita: 70 Anofadza & Anorota Wiener Imbwa Mazita
Maitiro ekusarudza rakasarudzika Goridhe Retriever zita
Ndeapi akanyanya kuwanda uye akanakisa mavara eChihuahua?
Chinese Chinese Shar-Pei Imbwa Inobereka FAQs uye Ruzivo
Iyo Yakazara Aussiedoodle Imbwa Inotungamira: Vanochengeta, Mifananidzo, Mbwanana uye Saizi Yevakuru
Icho Chirungu Cream Goridhe Retriever iri nani Goldie?
Sirivha Lab: Imbwa Inobereka Ruzivo uye Muridzi Wenongedzo
Iyo Blue Heeler Border Collie musanganiswa: Zvese zvaunoda kuti uzive
9 Zvinhu Zvausina Kuziva Nezve Czechoslovakian Wolfdog
Kerry Blue Terrier Imbwa Inobereka Ruzivo & maFAQ
imbwa nzeve dzinodziya kubata
Mhumhi hadzi mazita uye zvazvinoreva
australian shepherd mix neborder collie
golden retriever yakasanganiswa nehusky